Iyo nyowani vhezheni yeNeptune OS 5.5 yave kuwanikwa | Linux Vakapindwa muropa
Munguva pfupi yapfuura iye anovandudza anotarisira chirongwa ichi yeiyo GNU / Linux Neptune OS yekuparadzira yakazivisa kuti iyo nyowani yakagadzikana vhezheni yave kuwanikwa yeiyi Debian-based operating system.
Iyi nyowani yeNeptune OS yekuvandudza yakagadzirisa iyo ISO faira system mufananidzo, iyo inosanganisira shanduro nyowani dzese maturusi uye mapakeji anoumba sisitimu.
2 Nezve nyowani yeNeptune 5.5 yekuparadzira Linux
3 Dhawunirodha Neptune OS 5.5
Kune avo vaverengi vasati vaziva system ini ndinogona kukuudza izvozvo Neptune OS ndeye GNU / Linux kugovera kunobva paDebian 9.0 ('Tambanudza') iyo inoratidzira iyo KDE Plasma desktop nharaunda.
kunze kwaizvozvo ipa mushandisi "lightweight" vhezheni yeKDE Plasma desktop nharaunda. Izvi zvinoreva kuti ivo havapi iyo yazvino vhezheni iripo yezvakatipoteredza, asi asi kuti ivo vanogadzira vaite bvunzo dzavo uye voregedze kune iyo system nekumwe kugadzirisa.
Kuvandudza kugoverwa kweLinux Chinotariswa chikuru chaNeptune kuve sisitimu inoshandiswa kumabasa emultimedia, iyo ino sisitimu inouya yakatakurwa nemawoko mashoma ekushandisa erudzi urwu.
Kugovera Iyo ine mamwe ayo maturusi ayo ayo ekutsigira iyo sisitimu uye mushandisi ruzivo mairi. Yatinogona kuratidza ndeye Recffmpeg, Encode uye ZevenOS-Hardwaremanager.
Nezve nyowani yeNeptune 5.5 yekuparadzira Linux
Uku kuburitswa kutsva kwekuparadzirwa zviri chaizvo kuburitswa kwekuwedzera kweiyo 5.x dzakateedzana Neptune OS iyo inounza yazvino tekinoroji uye software kugadzirisa.
Mwedzi wapera gadziriso 5.4 yakagamuchirwa mukati mayo kuunzwa kwetema nyowani yekuona tema yeiyo system uye akati wandei akagadziridzwa zvinhu akaitwa.
Uku kuburitswa kutsva kweNeptune 5.5 inokiya iyo kernel vhezheni yeLinux kernel 4.17.8 uye gadziridza tafura yemifananidzo 18.1.6, AMDGPU 18.0.1, Nouveau 1.0.15 uye ATI / Radeon 18.0.1.
Mukuzivisa kweshanduro iyi nyowani, mugadziri wayo akagovana zvinotevera:
"Iyi yekumiririra inomiririra mamiriro azvino eNeptune 5.x uye inozorodza iyo ISO faira, saka kana iyo Neptune OS yakaiswa hapana chikonzero chekutora matani echinja. yakagadziridzwa rutsigiro rwehardware pamwe nekuvandudza madhiragi uye magadziriso ebug akawedzerwa mune ino nyowani yekuvandudza, uye iyo Linux kernel inosara iri vhezheni 4.17.8 «.
Kuburitswa kwaNeptune 5.5 Iyo zvakare ine yazvino firmware inogadziridza kubva kuIntel iyo inogadzirisa zvimwe zveazvino kuchengetedzeka kusagadzikana kwakaonekwa mumazuva achangopfuura (CVE-2018-3639 uye CVE-2018-3640).
Dzimwe shanduko huru mune iyi vhezheni ndiyo yekuvandudza yatinogona kuwana pairi KDE Sisitimu yemhando 5.49 uye KDE Zvishandiso vhezheni 18.08.
Sezvo iyo nyowani Rf5 vhezheni isingaenderane neQt 5.7, kumwe kumisikidza kwaifanirwa kuitwa kumatehwe ayo kune vhezheni 5.45.
Zvevamwe inogadziridza yatinogona kuratidza mukuburitswa kutsva tinogona kuwana zvinotevera:
Plasma Desktop yakagadziridzwa kuita vhezheni 5.12.6 kupa bug fixes.
Iyo Chrome browser inosvika mune yayo vhezheni 68 mairi iyo inogadzirisa matambudziko neHTML5 odhiyo uye vhidhiyo kutamba uye inopa yakagadzirwazve mutambi.
LibreOffice ikozvino yave kuwanikwa mushanduro 6.1.
Iyo FFMpeg multimedia nharaunda yakagadziridzwa kuita vhezheni 3.2.12.
Dhawunirodha Neptune OS 5.5
Kana iwe uchida kurodha iyi nyowani vhezheni yeLinux Neptune OS kugovera kuyedza mumuchina chaiwo kana kuisa pamakomputa ako, unofanirwa kuita zvinotevera.
Unogona kuenda kune webhusaiti yepamutemo yeprojekti uye muchikamu chayo chekurodha unogona kuwana chinongedzo chekutora mufananidzo weIO yehurongwa. Iyo yekubatanidza ndeiyi.
Ivo vanogona kushandisa iyo "Etcher" kunyorera kupisa iyo ISO mufananidzo weiyo system uye kugadzira iyo bootable svikiro pane USB pendrive.
Zvakare, zvakakosha kutaura izvozvo iyo sisitimu inowanikwa chete kune makumi matanhatu neshanu ekuvaka.
Izvo zvishoma zvinodiwa kuti ukwanise kuisa kugovera uku pamakomputa ako ndezvi:
1 Ghz Intel / AMD 64-bit processor kana yakakwira.
Ram ndangariro: 1.6 GB kana kupfuura.
Dhisiki nzvimbo: 8 GB kana kupfuura.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Iyo itsva vhezheni yeNeptune OS 5.5 yave kuwanikwa
Iyo yazvino beta yeSteamOS Linux inosvika neMesa 18.1.6 uye Nvidia 396.54